Oh lovely tiny leaves!
they are dancing in the breeze.
When I woke up from the dream
I saw red, yellow and green.
I'm thinking whose painting …
The nature is amazing.
က လို့ ယိမ်း။
ဝါ စိမ်း နီ။
​သြော် ... သဘာဝ
အံ့​ပေစွ။ ... ။
Translated by မေဓာဝီ
2014 က ရေးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကဗျာကိုယ် ဘာသာပြန်ထားတာပါ။
Posted by MND at 1:00 PM0comments
ခိုနားခဲ့ကြတဲ့ ငှက်​က​လေး နှစ်​​ကောင်​ရှိသတဲ့။
​လေထန်​ မိုးသည်း မုန်​တိုင်းထဲမှာ
၅၅ နှစ်​ တိုင်​ခဲ့ပြီ ... တဲ့။
တဖြည်းဖြည်း ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့အခါ ...
ခိုလှုံရာ သစ်​ပင်​ကြီးလည်း အိုမင်း
နား​နေရာ သစ်​ကိုင်းက​လေးလည်း ​ယိုယွင်း
အချင်းချင်း .... ​ဖေးကူရင်း
အချင်းချင်း ... ​တွေးပူရင်း
အချင်းချင်း ... ​ထွေးယူရင်း
နိုဝင်​ဘာလဟာ ကျမတို့ မိသားစုအတွက်​ အမှတ်​တရ​တွေ ပြည့်​နေတဲ့ လတလပါ။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်​ နိုဝင်​ဘာ ၃ ရက်​​နေ့က အ​ဖေနဲ့ အ​မေရဲ့ ဘဝအစ ... ။ အခုဆို ၅၅ နှစ်​ ပြည့်​ခဲ့ပါပြီ။ ဒီလို​နေ့မှာ မိဘ​နှစ်​ပါးနဲ့ အတူရှိခွင့်​ရတာ အလွန်​ကို ဝမ်းသာ ကြည်​နူး ပီတိ ဖြစ်​ရပါတယ်​။ အင်​မတန်​ ကုသိုလ်​ထူးတယ်​လို့လည်း ​မှတ်​ယူမိ ပါတယ်​။ ​
ငှက်​က​လေး​တွေကို ချစ်​တဲ့ အ​မေ့အတွက်​ ငှက်​က​လေး နှစ်​​ကောင်​ပုံ ဆွဲပြီး ကဗျာ​လေး​ရေးရင်း မျက်​ရည်​ကျရ တယ်​။ ဆပ်​လို့မကုန်​တဲ့ ​​ကျေးဇူးတရား​တွေ အနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာတရား​တွေ အတွက်​ ... ကဗျာတပုဒ်​ ပန်းချီတချပ်​နဲ့ ဘယလုံ​လောက်​ပါ့မလဲ။ မပြန်​ခင်​ ကျန်​​နေတဲ့ ရက်​​လေး​တွေ ... အတူ​နေရတဲ့ အခိုက်​အတံ့မှာ မိဘနှစ်​ပါးကို ဝတ်​ကြီးဝတ်​ငယ်​ ပြုစုခြင်းနဲ့ပဲ ... ​ပေးဆပ်​နိုင်​တာ ခွင့်​လွှတ်​ပါ​တော့။
Posted by မေဓာဝီ at 2:40 AM 1 comments
မင်္ဂလာ အရှိဆုံး ...
အစာရှာထွက်​တဲ့ ကြိုးကြာငှက်​ ​မောင်​နှံရယ်​ ...
ဘယ်​သူ​တွေ ဘယ်​​လောက်​ပဲ လှပပါ​စေ ...
ဘယ်​အရာ​တွေ ဘယ်​​လောက်​ပဲ သာယာပါ​စေ ...
အ​မေ့ရဲ့ ပြုံး​နေတဲ့ နှုတ်​ခမ်း
အ​ဖေ့ရဲ့ သွက်​​နေတဲ့ ​ခြေလှမ်း​တွေက
Posted by မေဓာဝီ at 6:58 PM0comments
၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉
Posted by မေဓာဝီ at 10:31 PM0comments
Posted by မေဓာဝီ at 10:35 PM0comments
အ​ဖေက စာဖတ်​ - အ​မေက ဘုရားရှိခိုး
မြက်​ခင်းစိမ်း နဲ့ ​ရေကန်​ပြာ
လမ်းး​လျှောက်​ရင်း ​ငေး​မော ...
နံနက်​ခင်း ​နေမင်းက မပူပြင်း
နံနက်​ခင်း လေညင်းတဝ ရှူသွင်း
​စံစားရင်း ... ခံစားရင်း
နံနက်​ခင်းကို ​ဆောင်​ကြဉ်းသွားချင်​တယ်​ ... ။
Posted by မေဓာဝီ at 9:00 AM0comments
အ​မေအို ... ။
Posted by မေဓာဝီ at 3:44 PM0comments
မီ မီ မီ ဒီလာခဲ့၊
Posted by MND at 1:11 PM0comments
သူနဲ့ မေးလ်​​တွေ talk​တွေ သုံးခဲ့ရလို့
ကမ္ဘာကြီးက ကျဉ်းသွား ...
သူနဲ့ ရှာရ​ဖွေရ ​ဖတ်​ရှု ​လေ့လာခဲ့ရလို့
အမြင်​​တွေ ကျယ်​လာ ...
အီး​မေးလ်​စစ်​ဖို့ browser ထဲဝင်​​တော့ Google ရဲ့ လိုဂို​လေးက ​ပြောင်း​နေတယ်​။ ဘာများလဲလို့ ကြည့်​လိုက်​​တော့ Google ရဲ့ ၂၀ နှစ်​ပြည့်​ ​မွေး​နေ့တဲ့။
Happy birthday ပါ ဂူဂဲ​လ်​​ရေ ...
ဟိုး အရင်​က MPT mail, Bagan mail အပြင်​ Yahoo တို့ MSN တို့ Postman တို့ တခြား free mail ရှိသမျှ အကုန်​လိုလို သုံးဖူး​ပေမဲ့ Google ​ရဲ့ Gmail လောက်​ ဘယ်​ဟာမှအဆင်​မ​ပြေဘူး။ Gmail ဟာ နာမည်​ကြီးသွားပုံများ Email လိပ်​စာ​မေးရင်​ အီး​မေးလ်​မရှိဘူး၊ ဂျီ​မေးလ်​ပဲ သုံးတယ်​လို့ ​ပြောကြတဲ့အထိ။ :)
Google ကို စတင်​တည်​​ထောင်​သူ​က​တော့ အဲဒီတုန်းက (1997/98) အ​မေရိကန်​နိုင်​ငံ ကယ်​လီဖိုးနီးယား ပြည်​နယ်​က Stanford တက္ကသိုလ်​မှာ PhD တက်​​နေကြတဲ့ Larry Page နဲ့ Sergey Brin ဆိုတဲ့ ​ကျောင်းသား နှစ်​​ယောက်ပါ တဲ့။ သူတို့ရဲ့ research project အတွက်​ လုပ်​ထားတဲ့ search engine ​လေးကို စစချင်း BackRub လို့ nick name ​ပေးထား​သေးတယ်​။ ​နောက်​မှ Google ဖြစ်သွားတာတဲ့။ Google ဖြစ်​​သွားပုံကလည်း ပြုံးချင်​စရာ။ Googol ကို စာလုံး​ပေါင်းမှား​ရေးမိတာ ဆိုပဲ​လေ။ Googol ဆိုတာက 10 ပါဝါ 100တဲ့။ 1 ​နောက်​မှာ သုည အလုံးတရာ ရှိတာ​ပေါ့။
အဲဒီနာမည်​ကို ​ရွေးတာက​တော့ ဒီ search engine ​လေးဟာ အချက်​အလက်​​ပေါင်း များစွာကို ​ထောက်​ပံ့​ပေးနိုင်​တယ်​ ဆိုတဲ့ ရည်​ရွယ်​ချက်​နဲ့တဲ့။ မ​မျှော်​လင့်​ဘဲ စာလုံး​ပေါင်း မှားသွား​တော့လည်း အမှား​ကောင်း​လေး ဖြစ်​သွားတာပါပဲ။ အခုချိန်​မှာ Google ကို အားလုံးသိ​နေကြပြီး Googol ကို​တော့ အားလုံး သိချင်​မှ သိကြပါလိမ့်​မယ်​။
ဒါ့အပြင်​ စာလုံး​ပေါင်းအမှား​လေး Google ဟာ ခုဆို အဘိဓာန်​​တွေထဲ ကြိယာ (verb) တခုအ​နေနဲ့ ခပ်​တည်​တည်​ ​နေရာယူနိုင်​​နေပါပြီ။ Google က​နေ ရှာရင်​ဖွေရင်​ googling လုပ်​တယ်​ ဆိုပြီးလည်း အများသုံးစွဲ​နေကြပြီ။
အခုချိန်​မှာ အသက်​၄၄ နှစ်​ရှိပြီဖြစ်​တဲ့ Page နဲ့ Brin တို့ဟာ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး စာရင်း အမှတ်​စဉ်​ ၁၂ နဲ့ ၁၃ ​နေရာမှာ ရှိသတဲ့။ ​အသက်​ ၃၃ နှစ်​ အရွယ်​ ​ဖေ့စ်​ဘွတ်​တည်​​ထောင်​သူ ဇက္ကာဘတ်​က နံပါတ်​ ၅ ဆိုလို့ ကျွန်​မက သိပ်​မ​ကျေနပ်​ချင်​ဘူး။ ​ဖေ့စ်​ဘွတ်​ထက်​ ဂူဂဲလ်​ကို ပိုနှစ်​သက်​မိလို့ပါ။ ဒါ​ပေမဲ့ ဂူဂဲလ်​ကို ကြိုက်​တယ်​ဆိုတာ ​ဖေ့စ်​ဘွတ်​ထဲ ​ရေး​နေရ​တော့လည်း ခက်​သားလား။ :)
Google ဟာ ဒီက​နေ့မှာ search engine နဲ့ ​မေးလ်​ ဆိုတာထက်​ အများကြီး လုပ်​​ဆောင်​​ပေး​နေပြီမို့ ​နေ့စဉ်​ဘဝအတွက်​ မရှိမဖြစ်​​ ဖြစ်​လာခဲ့ပါတယ်​။ ကျွန်​မ တ​နေရာရာ ​သွားရင်​ သွား​နေကျ​ နေရာ​တောင်​ google map က​နေ traffic ကြည့်​ပြီး သွား​လေ့ရှိပါတယ်​။ မ​ရောက်​ဖူးတဲ့ နေရာဆို ပိုဆိုး​သေးတာ​ပေါ့၊ သူ့ပဲ အားကိုး​နေရတာပါ။ ​နောက်​ပြီး ပုံ​တွေသိမ်းရင်​လည်း google photo မှာ။ Google ပြက္ခဒိန်​၊ Google reminder, blog လုပ်​တာက အစ Google နဲ့ သုံးခဲ့ရတယ်​။ အခုဆို Google play store, Google translator စသဖြင့်​ ​သုံး​နေရပြီ။ Google drive ​လေးကို ဖိုင်​​တွေ share လုပ်​ပြီး သုံးတတ်​သွားတာ မ​နေ့တ​နေ့ကမှ၊ အလုပ်​လုပ်​ရတာ ​တော်​​တော်​​လေး ဟန်​ကျလို့ Google ကို ​ကျေးဇူး​တွေ တင်​​နေရတယ်​။
တရက်​တရက်​ web browser ဖွင့်​လိုက်​ရင်​ အမှတ်​တရ အထိမ်းအမှတ်​ ​နေ့​လေး​တွေအတွက်​ ​ပေါ်လာတဲ့ ပုံ​လေး ​တွေက​နေ ဗဟုသုတ​လေး​တွေ ရသလို ​မေ့​နေတာ​လေး​တွေလည်း သတိရ​စေတယ်​။
ချစ်​တယ်​ google ...
အသက်​ ၂၀ရှိပြီဖြစ်​တဲ့ Google ​​လေး နှစ်​​ပေါင်းများစွာ သက်​တမ်းရှည်​ကြာပါ​စေ။
၂၇ စက်​တင်​ဘာ ၂၀၁၈
Posted by မေဓာဝီ at 6:16 AM 1 comments
Labels: အမှတ်တရ, မွေးနေ့ဆုတောင်း
Posted by မေဓာဝီ at 5:30 PM 8 comments